Waxaan ahay gabar jirta-16-sanno. Waxaana joogaa dalka Jarmal kaliya dhowr todobaad. Meeshaan wax kasta way ka duwanyihiin sidaan ku bartay. Sidee tahay qaabka nolosha dumarka iyo gabdhaha dalkan Jarmal?
Du bist hier: Startseite / Waxaan ahay gabar jirta-16-sanno. Waxaana joogaa dalka Jarmal kaliya dhowr...
19. Juli 2016 /in /von editorialteam
Waxyaabo badan waa in ay kuu gula muuqdaan kuwo aad la yaabto dalkaan Jarmal.
Dumarka iyo gabdhaha waxay haystaan isla xuquuqda ay haystaan nimanka iyo wiilasha.
Xuquuqahaan waxay khuseeyaan dhammaan dumarka iyo gabdhaha oo dhan kuwaas oo kunool dalka Jarmalka.
Waa muhiim in ay dumarka iyo gabdhaha ay oggaadaan xuquuqahaan waxa ay yihiin.
Ma garanaysaa adiga xuquuqahaaga?
Halkan waxaa ku qoran xoogaa tusaalo ah:
Adiga waxaa laguu oggolyahay in aad wax baratid oona tagtid iskuul.
Adiga waxaa laguu oggolyahay in aad nafsadaada dooratid shaqo.
Adiga waxaa laguu oggolyahay in aad keligaaga safartid marka aad weynaatid.
Adiga waxaa laguu oggolyahay in aad qaadatid qaraaradaada khaaska kuu ah.
Adiga waxaa laguu oggolyahay in aad kala dooratid haddii aad guursanaysid iyo haddii aadan guursanaynin.
Adiga waxaa laguu oggolyahay in aad yeelatid saaxiib wiil ah ama saaxiib gabar ah.
Adiga waxaa laguu oggolyahay in aad u labisatid sida aad jeceshahay.
Adiga waxaa laguu oggolyahay in aad banaanka u raacdid ama la baxdid qof kasta oo aad doonaysid.
Waa muhiim in ay wiilasha iyo gabdhahaba oggaadaan xuquuqahaan.
Xuquuqahaan waa in la ixtiraamaa oona la dhowraa.
Liinkigan soo socda wuxuu ku geynayaa bogg internet ay kujiraan macluumaad badan.
Waxaa la helayaa warqad macluumaad oo kuqoran luuqado badan (Albaniyan, Carabi, Bosniyan, Ingiriisi, Faarisi, Dari, Faransiis, Serbiyan iyo Soomaali – iyo weliba waxaa lagu daraa marwalba luuqado cusub).
U akhri qoraalka si taxadar leh.
Waa muhiim in aad oggaatid xuquuqaha dumarka iyo gabdhaha.
https://refu-tips.de/wp-content/uploads/AMYNA_logo_transparent_klein.png 0 0 editorialteam https://refu-tips.de/wp-content/uploads/AMYNA_logo_transparent_klein.png editorialteam2016-07-19 13:34:542016-07-19 13:34:54Waxaan ahay gabar jirta-16-sanno. Waxaana joogaa dalka Jarmal kaliya dhowr todobaad. Meeshaan wax kasta way ka duwanyihiin sidaan ku bartay. Sidee tahay qaabka nolosha dumarka iyo gabdhaha dalkan Jarmal?